वजन लागि प्रशिक्षक कसरी चयन गर्ने?
हुन वजन - त सबै समय, हरेक मिनेट आफ्नो शरीर आवश्यकता भन्दा धेरै बढी लगाउने। धेरै क्रूसमा लाइन को एक निश्चित महत्वपूर्ण वजन पछि सो को worsening को गुनासो। क्षमता काम नाटकीय खस्छ, केही घण्टा द्वारा निद्रामा बढ्छ लागि आवश्यकता। समय र ऊर्जा बर्बाद छैन? र अब हामी वजन तरिकाहरू देख रहे। धेरै विज्ञापन बोर्ड। तर वजन लागि प्रशिक्षक काम?
कि असम्भव छ?
कडाई बोल्ने, बोसो को छुटकारा रही लागि प्राविधिक माध्यम वैकल्पिक छ। तपाईं हिंड्न र वजन लागि घर फिटनेस उपकरण खरीद बिना चलाउन सक्छ। कम खाने गर्न, contraptions आवश्यक छैन। खैर, एउटा घडी लक, जो "रात dozhora" रोक्न फ्रिज मा हङ सकिन्छ कि बाहेक। र सामान्य मा, शक्ति सन्तुलन पनि माइनस तिर फेरबदल गर्दा मात्र वजन।
मिथकों विश्वास छैन!
घर प्रेस लागि फिटनेस उपकरण के तपाईं विश्वास गर्न मन पराएका छन् थियो, तपाईंको पेट समतल गर्न हुनेछ। शरीर नै कहाँ बोसो प्राप्त गर्न निर्णय गर्दछ। र सामान्यतया समस्या क्षेत्रमा वजन अन्तिम गुमाउन। तर तपाईं मात्र 2-3 किलो छ भने, यो अर्थमा रक प्रेस बनाउँछ -, मुद्रा सुधार सुन्दर भू-भाग को उपस्थिति आफ्नो पेट तयार (घन देखा पर्न असम्भाव्य छन्, तर अनुदैर्ध्य पट्टी शायद धेरै राम्रो)। यसबाहेक, बलियो पेट मांसपेशीमा राम्रो आफ्नो आन्तरिक अङ्गहरू सुरक्षित।
वजन खोने को सबै भन्दा राम्रो विधि
वजन लागि आदर्श प्रशिक्षक - एक ट्रेडमिल। र mechanically तर बिजुली को विनियमन गति। यस मामला मा, तपाईंले हिंडे कसरी ठ्याक्कै छिटो वा भाग्यो, र कुल दूरी थाहा गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईँले मौसम, दिन लम्बाइ निर्भर छैन, र यो तपाईं मिल्दो गर्दा कसरत सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ ट्रयाक सुविधाजनक छ। तपाईं एक पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ अन्तराल प्रशिक्षण र प्रतियोगिता को लागि पेशेवर तयार। सबै treadmills त्यहाँ एकदम संकुचित संस्करण हो, विशाल छन्। वजन लागि घर जिमहरु सधैं जिमहरू भन्दा अलि कम गरे।
यदि स्पेस साँच्चै खराब
यो पनि एउटा व्यायाम बाइक वा ellipsoid किन्न अर्थमा बनाउँछ। घर मा ठाउँ धेरै सानो छ भने, ठीक एयर पर्वतारोही भनिन्छ सिम्युलेटर, मदत गर्नेछ। पनि उसले बहाना (छैन मौसम, प्रकृति, दिन को समय) भन्दा राम्रो हुनेछ। वजन लागि प्रशिक्षक किन्न पर्याप्त छैन हुनत, तपाईं पनि यो संग कम्तिमा एक घण्टा सामना गर्न (यो आफूलाई क्यालोरी कुपोषण 500 त व्यवस्थित गर्न एकै समयमा आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद) आवश्यक छ।
चढाई सिढी simulating एक स्टेप्पर, - त्यहाँ अर्को विकल्प छ। सामान्यतया यो राम्रो महंगा छ, तर तपाईं एक पेशेवर किन्न भने, तपाईं एकांतर को खुट्टा को लागि एक एरोबिक व्यायाम र बल प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यो अर्थमा त, निवेश जायज छन्। तपाईं यो सिम्युलेटर को एडी भर भने (, बढ्दो यसलाई नजिकै थिए) झन् प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ को gluteal मांसपेशीमा। बस बिस्तारै यो जानुहोस्, र तपाईंले बानी ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं भोक र चक्कर आना महसुस भने यो व्यायाम गर्न छैन। खैर, पूल जान सक्नुहुन्छ भोक - एक बेहोश प्रकाश, दुःखद घटना संग fraught छ तपाईं चेतना गुमाउनु तपाईं कसरी नोटिस छैन भने। र सम्झना: वजन लागि सही प्रशिक्षक - वरिपरि धूलो भेला भएको छ छैन छ।
डुङ्गा मोटर लागि सही प्रोपेलर कसरी चयन गर्न
सिम्युलेटर Dolinova: समीक्षा। सिम्युलेटर Dolinova मा पाठ
खेलकुद मुटुको दर निगरानी कसरी चयन गर्न (समीक्षा)
सोभियत मोटरबोट "ओब"
Begovel: डाक्टर र खरीदारों को समीक्षा
Superheroes जीवनीहरू: स्कारलेट चुडैल। अभिनेत्री एलिजाबेथ Olsen
शिक्षा को मानवकरण: अवधारणा र सार
पुरातन युनानी दार्शनिक बारेमा जीवनी अरस्तू छोटकरीमा
पात किन पहेलो बैगुन बारी, र यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
वजन छिटो हानि लागि प्रभावकारी ककडी आहार: समीक्षा, आहार विवरण
"कोको पल्ट" (Togliatti): वर्णन, मेनु, फोटो
एक USB-कनेक्टर pinout के हो
आफ्नो हातले शिल्प: कसरी बनबिलाव को नंग्रा देखि कागज बनाउन
अवशिष्ट, एलर्जी खोकी र हृदय: लक्षण
एक श्रेणी र सुविधाहरू: को अंग्रेजी भाषामा क्रिया को Conjugation